Amathiphu Wokunakekelwa Komberry
Ezweni likhula ngezilwane ezingaba ngu-120 zomuthi wamabelebheri (mulberry). Lo muthi uvame eJapane, India, eChina nase-Asia Ephakathi, nezithelo zawo namaqabunga asetshenziswa ngempumelelo emithi ngoba banezokwelapha. Uyazi? Ama-workworm ayondla amaqabunga amhlophe. Umuthi wamabeledi yisitshalo esingamelana nesomiso nesibanda, okwenza kube isitshalo esikhulu kakhulu kunoma iyiphi indawo.
Konke okudingayo ukwazi ngokutshala isipinashi
Isipinashi yisitshalo semifino esiqukethe amavithamini amaningi alula kalula, ama-acids nama-fatty, ama-micro-macronutrients adingekayo ekudleni okunempilo. Le mifino iyasiza futhi iyadingeka kuwo wonke amathebula. Ukusetshenziswa kwesipinashi njalo kuyisimo esihle kakhulu sokuvimbela izifo zesifo sokugaya umzimba, izinzwa, izinhliziyo, ukuphazamiseka kwemithi, ukukhuthaza kakhulu ukuzivikela.
Ukukhula kwama-parsnip ezweni: ukutshala izithombo nokunakekelwa ensimini
I-Pasternak iyimifino, hhayi nje kuphela ehlwabusayo, kodwa futhi iyasiza kakhulu. Noma kunjalo, ukutshala kwalo embhede womkhaya kunamaphutha amaningi, ngaphandle kwalokho okungenakwenzeka ukuthola izithelo ezinkulu. Kuqondene nama-nuances enjalo ekuhlaleni ama-parsnips, futhi sichaza ngezansi. Ukutshala ama-parsnip for izithombo Izici zokutshala ama-parsnip ezweni ikakhulu kuxhomeke kulezi zici zemifino njengenkathi ekhulayo ende.
I-Kohlrabi Vitamin Bomb: Konke Okudingeka Ukwazi Ngokutshala Nokunakekelwa
Lolu hlobo lweklabishi lwafika kithi lisuka eSicily. Ujabulela ukuthandwa kakhulu eNtshonalanga Yurophu naseTurkey. Abalimi basekhaya bayazi ukuthi bangakhula kanjani iklabishi yekhohlrabi, ngoba kubhekwa njengabhomu bhomu futhi badlula ezinye izihlobo zabo ukunambitha. Mayelana neKohlrabi Kohlrabi yiklabishi yokuqala, iklabishi ephakeme kakhulu.
Izinhlobo ze-Nematode nezindlela zokulawula izinambuzane
I-Nematodes iphakathi kwezinambuzane ezivame kakhulu neziyingozi. Akugcini nje ukuholela ezifweni, ukufa kwezitshalo, kodwa futhi kungabangela ukulimala empilweni yabantu, izilwane. Kulesi sihloko sizobuka izinhlobo ze-nematodes nokuthi yikuphi, kanye nokunikeza izincomo eziyisisekelo mayelana nokulwa nematode engadini.
Yini ama-moles adla ensimini nase-cottage yabo ehlobo, ehlathini nasemanzini
Ama-moles, kanye nama-shrews kanye nama-hedgehogs, ayingxenye ye-insectivores. Bahlala ikakhulukazi ezindaweni ezinomhlabathi omanzi noma ongenamanzi - emadlelweni, emifuleni yezikhukhula zemifula, emaphethelweni amahlathi aqhamukayo namaxube. Isimo sezimvukuzane sivame ukuhlala ensimini noma engadini. Njengoba lapha yonke indawo kukhona umhlabathi okhululekile ngokumba, egcwele izibungu zomhlaba, futhi ukumba phansi umhlabathi uthando lokuhlala ezindaweni ezinjalo zokuzingela.
Indlela yokukhipha inundu endlini: izindlela zokulwa
Noma yimuphi umnikazi wendawo yokuhlala uhlangana njalo ngalezi zinambuzane njenge-molecule. I-butterfly encane kodwa encane kakhulu, engabangela ukulahlekelwa okukhulu. Enye ye-crumb enjalo ingalimaza ijazi elibi kakhulu ukuze kungenzeki ukuyibuyisela. Ake sithole ukuthi singabhekana kanjani nale nkinga noma sivimbele nokuvela kwayo.
Ukubamba igundane: izicupho ezenziwe ngokwayo kusuka ebhodleleni leplastiki
Uma ama-rodents amancane ebelelwa endlini, efulethini noma emakamelweni aphansi, udinga ukuwaqeda. Amagundane akwazi ukulimaza kakhulu ezitokisini zokudla, ukuphanga izinto eziyigugu, abe umthombo wamakha evuthayo nezifo. Lesi sihloko sichaza izindlela eziningana zokwenza ama-mousetraps kusukela ezakhiweni ezitholakalayo ngezandla zabo.
Izingibe ezenziwe ngokwezifiso zamagundane: kanjani ukuheha nokubamba isilwane
Kusukela ezinsukwini zikaHammelnian Pied Piper owaziwayo, owalonda zonke izimbongolo ngaphandle komuzi futhi wangena ngomfula emfuleni edolobheni, amanzi amaningi ageleza ngaphansi kwalo. Kodwa okuncane kuye kwashintsha ekuhlanganeni okuphakade phakathi kwabantu namagundane amabi. Abantu ngobuhlakani obunamandla nokudala ngobuciko bavela nazo zonke izindlela ezintsha zokuqothula izinambuzane, kanye namagundane enokuzala okukhulu nokuqina ngaphambi kokuba ukushaywa kwezimangalo zigcwalise ngokushesha ukulahlekelwa futhi kuphinde kube nokuhlaselwa emabhakeni abantu.
Inundu yokushisa: indlela yokubhekana nenambuzane engadini
Ukulungisela insimu yezithelo ebusika sekube umsebenzi obaluleke kakhulu kubo bonke abalimi kanye nezakhamuzi zasehlobo, okumele kwenzeke ngesikhathi sekwindla ukuze kutholakale izimo ezihle kakhulu nezivikelwe zemithi yezithelo kanye nobusika babo obuphumelelayo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi emithini yezithelo zamatshe, ezikwazi ukubhekana nezimo ezinzima ezisenyakatho ebusika.